Guddoomiyaha maamulka KMG Kismaayo oo shir jaraa’id ku qabtay Kismaayo
Kismaayo:-Guddoomiyaha maamulka KMG ah ee magaalada Kismaayo Sheekh Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose waxaana uu ka hadlay arimo badan waxaana ka mid ahaa Amaanka gobalka J/hoose ,Maamul u sameynta gobalada jubooyinka .
Sheekh Ahmed Madoobe ayaa waxaa uu sheegay in dowlada Federaalka ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay ka wada tashan doonaan maamul u sameynta gobalada jubooyinka wuxuuna xusay in qolo walba dowrka ay leedahay uu cad yahay wuxuuna uga digay DFS in ayu soo magacaawwdo maamul magaalada Kismaayo.
Guddoomiyaha maamulka KMG ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxaa kale oo uu sheegay in dhawaan uu furmi doono shir maamul loogu dhisi doono Jubooyinka ,wuxuuna ku celiyey in xiriirka maamulkiisa iyo DFS uu wanaagsan yahay.
Ahmed Madoobe ayaa sheegay in magaalada Kismaayo iyo guud ahaan degmooyinka gobollada Jubbooyinka ay joogaan ciidamada huwanta amaankooda uu yahay mid la isku haleyn karo waloow ay weeraro gaadmo ah ka dhacaan .Guddoomiyaha maamulka KMG ee magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale sheegay in DFS ay gudoomin doonto shirka dhawaan ka furmi doona magaalada Kismaayo.
Guddoomiyaha maamulka KMG ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM ay la wareegi lahaayeen deegaano ka baxsan magaalada Kismaayo balse aysan heysan ciidamo ku filan wuxuuna hoos ka xariiqay in ay dalbadeen ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan AMISOM iyo kuwa DFS.
230,400 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress